Ka Soo Bilow Aguero Ilaa Fabregas, Man City Ilaa PSG, Heshiisyadii Ugu Waa Weynaa Ee Dhacay Xagaagan | WWW.DARARWEYNE.TK
Sida xagaa kasta ciyaaryahano waa weyn ayaa la kala iibsaday, Cesc Fabregas ayaa ugu danbeyn ku laabtay Barcelona, Sergio Aguero ayaa ka tagay Atletico Madrid, Javier Pastore ayaa si la yaab leh ugu biiray PSG, iyo sidoo kale Samuel Eto’o oo isna si lama filaan ah kooxda Anzhi ku biiray.
Waxaa jiray heshiisyo waa weyn oo guuldareystay sida Carlos Tevez oo aan ka tagin Manchester City, Wesley Sniejder oo iska sii joogay Inter, Luka Modric oo baaqi ku ahaaday Tottenham, Kaka oo weli Los Blacos ka dhex muuqda, iyo kii ugu weynaa ciyaaryahan Neymar oo aan Santos ka tagin.
Guud ahaan shanta horyaal ee waa weyn waxa ay qarash gareeyeen in ka badan 1.6 bilyan euro, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League iyo Serie A dhamaantood midkoodna kama xishoonin inay suuqa ka soo adeegtaan, lakiin Horyaalka Ingariiska ayaa si fiican lacag adag u geliyay.
Shanta Kooxood Ee Yurub Ee Lacagta Ugu Badan Geliyay Suuqa Xagaagan.
Manchester City ayaa xagaagii hore qarashgeysay 120 milyan euro, sannadkii labaad oo isku xigta waxa ay noqdeen kooxda qarash ugu badan gelisay suuqa kala iibsiga, waxaana ay ku soo adeegteen 92.2 milyan euro xagaagan. Kala bar lacagtaas waxa ay ku baxday hal ciyaaryahan kaliya Sergio Aguero. City waxaa kale oo ay soo xero gelisay Samir Nasri, Stefan Savic iyo Gael Clichy, halka Owen Hargraves uu ku yimid si lacag la’aan ah.
Kooxda labaad ee lacagta ugu badan suuqa gelisay Premier League waa Cheslea. Ka dib markii ay xagaagii hore inta badan ka aamusnaayeen suuqa, The Blues waxa ay xagaagan soo xero gelisay Romelu Lukaku, Juan Mata, Lucas Piazon, Thibaut Courtois, Oriol Romeu iyo Raul Meireless oo aakhirkii suuqa ay soo xero geliyeen.
Kooxda difaacaneysa horyaalka ee Manchester United ayaa u baahneyd goolhaye si joogta ah u bedela Edwin van der Sar, waxaana ay 20 milyan euro ka soo bixiyeen David de Gea, Ashley Young iyo Phil Jones ayaa sidoo kale xagaagan Old Trafford yimid.
Milkiilaha Liverpool John Henry ayaa dhadhamiyay xagaagiisii ugu horeeyay ee kooxda uu iibsaday, mana uusan ka shiixin inuu lacag adag geliyo Reds, waxaana ay qarashgareeyeen lacag ka badan 65 milyan euro, iyagoo keenay ciyaartoy ay ka mid yihiin Stewart Downing, Jordan Henderson, Charlie Adam, Sebastian Coates iyo Jose Enrique. Bellamy iyo Doni ayaa iyagana si bilaash ah ku yimid.
Dabcan sidoo kale Arsenal, oo ay ka tageen Cesc Fabregas iyo Samir Nasri ayaa u baahneyd inay dib isku qaabeyso. Heshiisyo saacadihii ugu danbeeyay la dhameystiray ayaa keentay inay la soo wareegaan Mikel Arteta, Per Mertesacker, Andre Santos, Park Chu-Young, iyo Yossi Benayoun oo amaah ugu yimid, waxaana ay ku biirayaan Alex Oxlade-Chamberlain iyo Gervinho, oo isla xagaagan yimid Gunners.
Kooxaha Serie A ayaa dhawaanahan aad ugu liitay dhinaca suuqa kala iibsiga, lakiin waxa ay sannadkan la soo laabtay si dardar ah. Juventus ayaa aheyd kooxda lacagta ugu badan gelisay suuqa kala iibsiga, waxaana ay wadar ahaan qarashgareeyeen 85 milyan euro, iyagoo si rasmi ah u la wareegay Alessandro Matri iyo Fabio Quagliarella, waxaana sidoo kale ay soo iibsadeen wajiyo cusub sida Arturo Vidal, Mirko Vucinic, Eljero Elia, Stephan Lichtsteiner iyo Andrea Pirlo oo isna si lacag la’aan ah kaga yimid AC Milan.
Milkiilaha cusub ee Roma Thomas DiBenedetto waqti dheer kuma qaadanin inuu jeebkiisa gacanta geliyo, iyadoo kooxda ay qarashgareysay 78.3 milyan euro oo ay kula soo wareegeen Bojan Krkic, Erik Lamela, Miralem Pjanic, Simon Kjaer, Pablo Daniel Osvaldo, Maarten Stekelenburg, iyo sidoo kale Gabriel Heinze oo bilaash ugu soo biiray iyo Fernando Gago oo amaah ay ku qaateen.
Inter ayaa u muuqatay inay suuqa ka aamusayaan xagaagan, lakiin markii uu Samuel Eto’o ka aaday Anzhi, Massimo Moratti waxa uu islamarkiiba keenay Diego Forlan, Mauro Zarate. Ricky Alvarez, Emiliano Viviano iyo Jonathan ayaa sidoo kale kooxda xagaagan ku soo biiray. Waxaana ay ku guuleysteen inay ceshtaan Wesley Sneijder.
Kooxda horyaalka heysata horyaalka AC Milan waa kooxda qof walba oo Serie A jooga ay isku dayayaan inay soo qabtaan, waxa ay dhameystireen xagaagan heshiisyadii Zlatan Ibrahimovic iyo Kevin-Prince Boateng, lakiin waxa ay si bilaash ah kula soo wareegeen Philippe Mexes, Taye Taiwo, iyo Alberto Aquilani oo amaah ku tagay, iyo Stephan El Shaarawy, Antonio Nocerino.
Napoli ayaa ku qasbaneyd inay is hubeeyaan madaama ay ka qeyb galayaan Champions League, waxaana ay suuqa la galeen 61.4 milyan euro. Edinson Cavani ayay si rasmi ah kala soo wareegeen Palermo, halka Ghokhan Inler ay ka keensadeen Udinese. Miguel Britos, Blerim Dzemaili, Federico Fernandez iyo Antonio Rosati, ayaa ka mid ah ciyaartoydooda cusub.
Palermo ayaa weysay xiddigoodii ugu weyn Javier Pastore markii uu 43 milyan euro ugu biiray kooxda PSG. Lakiin lacagtaas si fiican uma aysan isticmaalin iyagoo soo iibsaday Matias Silvester iyo Andrea Mantovani. Lazio ayaa iyadana suuqa sidoo kale ka muuqatay markii ay soo xerogeliyeen Djibril Cisse, Lorik Cana, Federico Marchetti iyo Miroslav Klose.
Markii ugu horeysay muddo badan, labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona waxa ay ka maqan yihiin shanta kooxood ee ugu sareysay ee lacagta badan bixiyay xagaagan.
Madrid waxa ay qarashgareysay 55 milan euro, lacagtaas inta badan waxa ay ku baxday Fabio Coentrao oo 30 milyan euro ay ku soo
Shanta Ciyaaryahan Ugu Qaalisan Ee Xagaagan La Iibsaday.
iibsadeen. Nuri Sahin, Jose Callejon iyo Raphael Varane ayaa iyagana ku yimid lacag aan sidaasi u buurneyn, halka Hamit Altintop uu ku tagay si bilaash ah.
Kooxda Barcelona ayaa lacag la mid ah tan kooxda ay xafiiltamaan iyadana qarashareysay xagaagan, 26 milyan euro oo ku bixiyeen Alexis Sanchez, iyo 29 milyan euro oo ku bixiyeen Cesc Fabregas.
Kooxaha kale ee La Liga ee doonaya inay soo qabtaan labadaas kooxood waxaa ugu horeysay Atletico Madrid. Waxa ay waayeen seddex ka mid ah xiddigahooda Aguero, Forlan iyo De Gea, lakiin lacagtii ay ka heeleen waxa ay u isticmaaleen si caqli uu ku jiro, waxa ay 40 milyan euro kula soo wareegeen Radamel Falcoa. Arda Turan Silvio, Ruben Micael ayaa iyagana waxa ay ugu fadhiyaan 25 milyan euro, halka Diego uu amaah ahaan kaga soo biiray kooxda Wolfsburg.
Valencia waxa ay weysay ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee xiddigahooda ka mid ahaa, Juan Mata ayaa raacay wadadii David Villa iyo David Silva ay kaga tageen Mestalla Stadium. Lakiin waxa ay sameeyeen saxiixyo uu caqli la socdo Pablo Piatti, Diego Alves, Dani Parejo, Adil Rami, Victor Ruiz iyo Sergio Canales oo amaah ugu yimid.
Kooxda Malaga ayaa ah koox kale oo iyadana lacag badan bixisay waxaana ay suuqa gelisay 55 milyan euro ka dib marki uu ay iibsadeen milkiilayaal Qatari ah. Jeremy Toulalan, Ruud van Nistelrooy, Joris Mathijsen, Joaquin iyo Nacho Monreal ayaa dhamaantood ku biiray La Rosaleda, iyo soo iibsashadooda ugu weyn Santi Cazorla. Kooxda Villareal ayaa iydana weysay Capdeliva lakiin waxa ay soo xero geluyeen Cristian Zapata, Javier Camunas, iyo Jonathan de Guzman
« Suuqa Kala Iibsiga ee Horyaalka Ingariiska Oo Rikoor Cusub Oo Dhinaca Lacagta Ah Dhigay Sanadkan
Ciyaar Saaxibtinimo : Argentina Oo Ka Taqalustay Nigeria »